DEG DEGA_Dagaal Kulul Oo Caawa Ka Dhexqarxay Xuutiyiinta Iyo Taageerayaasha Madaxwaynihii Hore Cali Cabdalla Saalax +VIDEO | Camuud News Media Network
Home » CAMUUDMEDIA LIVE NEWS » DEG DEGA_Dagaal Kulul Oo Caawa Ka Dhexqarxay Xuutiyiinta Iyo Taageerayaasha Madaxwaynihii Hore Cali Cabdalla Saalax +VIDEO
DEG DEGA_Dagaal Kulul Oo Caawa Ka Dhexqarxay Xuutiyiinta Iyo Taageerayaasha Madaxwaynihii Hore Cali Cabdalla Saalax +VIDEO
Waxaa jira warar sheegaya in la weeraray guriyo ay lahaayeen dad caan ah oo xiriir la lahaa Mr Salex.
Saraakiil u hadshay Xuutiyiinta ayaa sheegay in ay dib u qabsanayaan dhul horey ay u qabsadeen taageerayaasha Mr Salex.
Kooxda falaagada Xuutiyiinta ayaa waxay horey u sheegeen in weerar gantaalo ah ay ku qaadeen dalka Imaaraadka Carabta.
Hasa yeeshee dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay in uusan jirin wax weerar ah oo lagu soo qaaday dhulkeeda.
Xuutiyiinta iyo ciidamada taabacsan Cali Cabdle Saalax ayaa horey u ahaa xulufo islmarkana dagaal kula jiray xulufada uu Sacuudiga hogaamiyo.
Shacabka deggan caasimada Yamen ee, Sanca, ayaa ku soo waramaya in dagaal qaraar u ka dhex qarxay falaagada Xuutiyiinta iyo xoogag taabacsan madaxwaynihii hore ee Yamen Cali Cabdulle Salex.
Madaxweynihii hore Cali Cabdallah Saalax oo ay ciidamadiisa sabtidii shalay la wareegeen in badan oo kamid ah caasimada Yemen ee Sanca, ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo xulafada Sacuudiga.
Hadii walaalaheen iyo deriskeena ay joojiyaan duqeynta iyo xayiraada ay dul dhigeen wadankeena, oo gar gaarka loo furo shacabka, waxaa diyaar u nahay in aan wadahadal la galno sidaas ayuu yidhi Cali Cabdallah Saalax oo fariin u dirayey Sacuudiga.
Afhayeen u hadlay xuuthiyiinta ayaa ku eedeeyey Saalax iyo ciidankiisa inay inqilaabeen maamulkii ay wada dhisteen, waxayna Xuuthiyiinta sheegeen inaysan iyagu marnaba wadahadal la geli doonin Sacuudiga.
Hogaamiyaha Xuuthiyiinta Cabdulmalik Al Xuthi ayaa sheegay in dagaalka ka socda Sanca lagu dhameeyo wadahadal, isagoona kula taliyey Cali Cabdallah Saalax inuu joojiyo xiisada uu wado.